Fanontaniana 6 Tsy Sahinao Mikasika An’i Kamerona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2014 8:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, čeština , русский, 日本語, Français
Mpianatra any Kamerona – Sehatra ho an'ny daholobe
Lahatsoratra tafiditra amin'ny andiany fandalinan‘ny Global Voicesa lohahevitra tsy dia fantatra loatra any amin'ny firenena maro ity. Andiany izay nanomboka tamin'ny fibanjinana an'i Madagasikara [fr]. Anio i Gaelle Tjat ao Yaoundé dia manazava fanontaniana 5 momba an'i Kamerona, ho an'ny Global Voices. Miaraka amin'ny fanomezan-dàlana avy aminy no namerenana namoaka ity lahatsorany avy any amin'ny bilaoginy manokana, Amazing Tjat Bass, ity:
1. Ankoatra ny filoha Biya, iza avy ireo olona mbola to teny/malaza ao Kamerona amin'izao fotoana izao ?
Paul Biya – Sehatra ho an'ny daholobe
Na isika olom-pirenena tsotra izao aza dia manontany tena. Ka raha mahita ny amin'izy ireny ianareo, mba ampahafantaro anay. Kanefa tsy maintsy fantarina fa ny rafitra Kamerone dia narafitra mba tsy hanasongadina olona IRAY. Na farafaharatsiny, eo amin'ny sehatra politika. Sarotra araka izany ny hahita olona to teny ao anatin'io vanim-potoana io. Anatin'ilay fe-potoana. Manàja tena maka sisiny ireo olona tena manana ny toetran'ny ho to teny. Tsy ho ela dia handefa azy ireny any am-ponja ny “papangolahy”. Araka izany dia ireo olona malaza, fa tsy ireo to teny, no horesahantsika. Ho an'ny andian-taranaka niaina ny taona 80 (sy latsak'izay) izay misy ahy. Ao anatin'ity sokajy ity no azo ametrahana an'i Samuel Eto’o sy ireo rehetra izay nametraka ny akony tonga hatrany amin'ny tany misy anareo. Raha tsy izay, ao amin'ny Twitter, manana ireo mpitarika anay nalahatr'i Dipman izahay. Farafaharatsiny aloha, mba nanova ny fomba fanao izy ireto, nanozongozona ny laharana ary manome antsika ny faniriana hino fa mety hisy ny hoavy mamiratra na eo aza ny fahasahirànana. Ireo « olo-malaza»-‘ny fanesorana azy tanaty fandaharana.
2. Tena misy tokoa ve ny fifanenjanana eo amin'ireo mpiteny frantsay sy ny mpiteny anglisy sa ny sasany no te-hanatavy resaka ?
Hum ! Raha ny hevitro manokana aloha, amin'ny maha-olon'ity tany ity ahy, miara-miaina am-pilaminana ny mpiteny Anglisy sy ny mpiteny Frantsay manerana ny firenena. Na izany aza, mitoetra ny olana rehetra fidirana anaty fiarahamonina sy firaisam-pirenena no resahana. Ilaina araka izany ny manipika etoana ny « fanaovana an-jorom-bala» (amin'antony) izay manjo ireo teratany avy any « atsimon'i Kamerona ». Ireo fitarainana avoitra amin-kery sy fahavononana ataon'ireo antoko toy ny “Southern Cameroon National Council (SCNC)” izay mitaky ny fisintahana. Raha manao fitetezana kely any amin'ireo andiany lazaina hoe « miteny anglisy» sy miteny frantsay ianao, dia tena mandona tokoa ny fahasamihafàny. Amin'ny lafiny miabo no iresahako ny mpiteny anglisy. Amin'ny resaka fotodrafitrasa sy ny fifehezantena. Indrisy anefa fa tsy hita taratra manerana ny firenena ny fandalàna azy ireny. Isaina amin'ny rantsan-tànana any amin'ny toerana sasany, ireo mpikambana nivoaka avy ao amin'ity faritra ity. Fotoana izao hamerenana ny mizàna tsy mitsindry ila. Ity lahatsoratra ity sy ity no mitondra fanazavana misimisy kokoa momba ilay olana.
3. Amin'ny fiainana andavanandro, miteny anglisy ve ianao? Frantsay sa izy roa?
Mampiasa fiteny roa i Kamerona. Fa ny vahoakany no, na miteny frantsay na miteny anglisy. Ankavitsiana no hoe izy roa. Tsy manao afa-tsy ny maka ho ohatra izay ataon'ny filohanay izahay, izay nanao tamin'ny teny frantsay ny kabary fanokafana ny fivoriamben'ny “Commonwealth” (Fiombonamben'ireo tany mampiasa sy miteny ny teny Anglisy). Ny hany fotoana nanasongadinana ny fampiasàna ireo fiteny roa dia ny fampiharana ny « pidjin» , fampifangaroana ny teny frantsay, anglisy ary portiogey, espaniôla teraka avy any amin'ny morontsiraka mba hanamoràna ny raharaham-barotra teo amin'ireo mpivarotra sy mpividy andevo. Na ny « camfranglais » tenin-jatovo noforonin'ny Kamerone mba hampandrimpandry saina azy.
4. Ireo ora mamy teo amin'ny firenena na ireo fotoana tena nampirehareha ho an'i Kamerona sy ny ny mifanohitra amin'izay, ireo fotoana nampalahelo?
Mitolona hisian'ny fahatsiarovana ireo maherifo zary adino ireo tanora tonga saina ankehitriny. Ireo fotoana nampirehareha anay dia ny fanantanjahantena no mameno azy. Voasoratra miaraka aminy tantaran'ny Lions Indomptables (Liona tsy mety folahana) : ny ampahefa-dàlana tratrany tamin'ny Fiadiana amboara erantany tany Italia tamin'ny 1990, ireo fandresena tamin'ireo andian-dalào CAN 2000 sy ireo lalao olaimpika, ny fandresena tamin'ny CAN 2002;ny lalào nahafinaritra nandritry ny fiadiana ny amboaran'ny kaonfederasiôna tamin'ny 2003 sy ireo medaly olaimpika azon'i Françoise Mbango tamin'ny JO 2004 sy 2008. Teo noho eo ny fotoam-piravoravoana tamin'izany, tsy nisy fiantohana azo antoka ho an'ireny tetikasa isan-karazany ireny. Noho izany dia zoro kely ao anatin'ny fahatsiarovan'ny daholobe no mba misy nametrahana azy ireny. Eo ampiandrasana angamba ny fandraisana ny CAN 2016 sy 2019.
Ny loza nahatsiravina tao Nsam
Momba ny fotoana nampalahelo kosa, dia tanisaiko ireo maherin'ny 1700 niharam-boina tamin'ilay zava-doza tao amin'ny Farihy Nyos nitranga ny 21 Aogositra 1986, ireo teratany Kamerone niisa 250 mahery namoy aina tao Nsam ny 14 Febroary 1998 taorian'ny fipoahan'ilay fiarandalamby 2 fitateran-tsolika an'ny SCDP, noheverin-dry zareo hanatsaratsara ny fiainany ary ny fahafatesan'i Marc Vivien Foé nandritry ny mondovision.
Farihy Nyos, avy amin'i Peuple Sawa
5. Inona no tsy maintsy fantarina momba ny Boko Haram ao Kamerona ?
Tany am-piandohana dia nisy ireo Nizeriana mpihoko. Nalain-dry zareo ankeriny ireo mpitondra fivavahana, ny Shinoa ary ny tovovavy. Efa navotsotra daholo ireo mpitondra fivavahana sy ireo Shinoa rehefa notakalozana vola Biya an-davitrisa maro. Mbola voatazona any ho any hatrany kosa ireo tovovavy. Any Nizeria.
Ao Kamerona, tato anatin'ny fotoana vitsy, misy ireo nohadinoina/mangidy hoditra amin'ny mpitondra ary lazaina ho mifandray tendro amin'ny fahavalo (tena misy na foronina). Mitondra mankany amin'ny fisamborana tsy misy fitsaràna ireny fiampangàna ireny ary hatrany amin'ny fisavàna tampoka ny toeram-ponenan'ireo ahiana ho mpiray tsikombakomba. Sarotra araka izany, ao anatin'izay vanim-potoana izay, ny “hisintona herinaratra” avy ao, ka hitondra fanazavàna ho an'ny mpamaky mikasika io olana io, izay hita ho goavana anefa any amin'ireo zana-paritra ao Afrika Afovoany.
6. Naninona i Serena Williams no nitafy ny fanamian'i Kamerona ?
Serena Williams – Sehatra ho an'ny daholobe
Indray andro, tamin'ny lalào famaranana ny Rolland Garros, nahoron'ny “la go” tao anatin'ny maitso-mena-mavo « ny fitaovany » ! Nanome fifandraisana taminy sy ny “liona” vitsivitsy ny « sabitou ». Teo no nananako ny tena fomba fijerin'ireo teratany Kamerone momba ireo “lion-dry zareo”. Manana ny vola hitantànana vehivavy tahaka iny ve i Mboma ? » ; « Ratsy endrika loatra i Ndiefi ka tsy mendrika ny handray ny arahabany »; « Nolazainy tamin'i Eto’o fa tanora loatra loatra tsy sahaza azy izy »…Dia faly ery tokoa ny gazety nandray izany.
Ny ekipam-pirenen'i Kamerona – Sehatra ho an'ny daholobe
Ary dia tsotra kely anefa no anazavàna azy : TSY AZO FOLAHANA i Kamerona tany ampiandohan'ny taompolo 2001 tany. Namorona zava-baovao ry zareo tamin'ilay fanamiana tsy misy tànan'akanjo izay eny an-kianja filalaovana “tennis” no tena miasa. Nila fanamiana i Séréna ho an'ilay tapa-bolana nilalaovana tao Parisy. Rehefa nandroso hevitra taminy ny PUMA, izay sady mpanohana ny “Lions” no mpanohana an'i Séréna, sarotra ho azy ny tsy hanaiky, indrindra fa tamin'izay fotoana izay dia nifampizaràn-dry zareo ilay: TOE-PANAHY TSY MANAIKY RESY. Mijanona eo ny tantara.
Satria mamolaka izay rehetra nolalovany ry Liona #LionSpirit RT@TjatBass: Naninona i Serena W. no nitafy ny maitso-mena-mavo taminà fotoana iray?
Sady izao koa e, tsy mbola nahafaty na iza na iza ny resabe.
Dia izay. Antenaiko fa nahafa-po anareo ny kiriko ary mba nanome anareo hetaheta hahafantatra bebe kokoa momba an'i Kamerona, fireneko mahafinaritra.
*Fitaovany: ilazan'ny Kamerone ireo mivoiboitra manasongadina ny vehivavy.
*Sabitou : ilazan'ny Kamerone ireo manampahaizana saingy manam-pifandraisana mampiahiahy